Hordhaca Horyaalka-Maxaa Kala Haysta Kooxaha Dekedda Iyo Elman Oo Leh Kulan Adag – Goobjoog News
Kooxda horyaalka xafidanaysa horyaalka Somalia Premier League ee Dekedda ayaa kulankii afaraad horyaalka wajahaysa dhigeeda Elman oo oalahan soo bandhigtay qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay.
-Dekedda ciyaartii u dambeesay horyaalka waxa ay 2-0 kaga badiyeen xidigaha fasal ciyaareedka u soo gudbay horyaalka Somalia Premier League ee Midnino,kooxda Tababare Yuu-Cali waxa ay xaadir ku yihiin kaalinta 1-aad,iyagoo leh 10-dhibcood.
-Kooxda Elman kulankoodii u danbeeyay horyaalka waxa ay guul daro 1-0 ka soo gaartay xidigaha naadiga wasaarada warfaafinta ee Madbacada Qaranka,Elman waxa ay fadhisaa kaalinta 3-aad ee kala sareynta horyaalka waxayna lee dahay 8-dhibcood.
-Dekedda waxaa kulanka caalamada jaalaha ama (Yellow Card) kaga maqan weeraryahankooda Zakariye Towfiiq sidoo kale Dekedda waxaa macquul ah in uu san kulanka kasoo muuqan laacibka reer Kenya Reymond Mongi.
-Kooxda Elman ma jiraan waxa Ciyaartooyda oo kulanka kaga maqan dhaawac ama sabab kale taasi rajo wanaagsan u ah taageerayaasha kooxda.
–Cabdiqaadir Siidow Cali (Seyga Ruushka) waxaa ka mid ahaa xidigihii labadii sano lasoo dhaafay kooxda Dekedda kula soo guulaystay horyaalka,isagoo sidoo kale soo noqday kabtanka kooxdii Gobolka Banaadir tartanka Maamul-Goboleedyada 2016,balse iminka isaga uu xeran maaliyada Elman ayuu ka hortagayaa kooxdiisii hore ee Dekedda.
05/02/2018 Dekedda SC 1:0 Elman FC
18/06/2012 Elman FC 4: 0 Dekedda SC
Kooxaha:-Dekedda VS Elman Taariikhda:-07-03-2019
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: -31°-26°C W/D-Maxamed Xuseen Qalinle